पर्यटनमन्त्री बनेका योगेश भट्टराई को हुन् ? - Dainik Nepal
पर्यटनमन्त्री बनेका योगेश भट्टराई को हुन् ?
रामकुमार शाही २०७६ साउन १५ गते १५:४९
-रामकुमार शाही/दैनिक नेपाल
काठमाडौँ, १५ साउन । बुधबार दिउँसो एक्कासी आएको एउटा खबरले नेकपा कार्यकर्ताहरुमा खुशी छायो । बधाई र शुभकामनाले सामाजिक सञ्जाल रंगियो । सत्तारुढ नेकपाका कार्यकर्तामात्र होइन विपक्षी दलका नेता/कार्यकर्ताले समेत बधाई र शुभकामना दिए ।
खबर थियो–नेकपा युवा नेता योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री बने, आजै सपथ हुने !
वास्तवमा भट्टराई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनताका नै मन्त्रीका लागि चर्चामा रहेका उम्मेदवार दिए । चुनाव जिते उनी मन्त्री हुने धेरैको अपेक्षा थियो । त्यही किसिमले प्रचार—प्रसार पनि भइरहेको थियो । किनकी, तत्कालीन एमालेको पदाधिकारीभित्र लाभको पदमा नपुगेका एक मात्र पात्र भट्टराई थिए ।
तत्कालीन एमालेका सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका उनी आफ्नै गृहजिल्ला ताप्लेजुङबाट वाम गठबन्धनको प्रतिनिधित्व गर्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।
भट्टराई काँग्रेसका केशवप्रसाद दाहाललाई १२ हजार पाँच सय ९१ मतले हराउँदै विजयी भए । भट्टराईले २९ हजार ४ सय ७९ मत ल्याए भने उनका प्रतिद्वन्द्वी दाहालले १६ हजार ८ सय ८८ मत ल्याए ।
तर, चुनाव जितेर आएपनि भट्टराईले मन्त्री बन्न पाएनन् । आकांक्षी सबैजना एकैपटक मन्त्री बन्न सम्भव पनि थिएन, हुँदैन पनि । तर, जब योगेश मन्त्री बनाइएनन् तत्कालीन एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्काे आलोचना सुरु भयो । नहोस् पनि किन, उनै ओलीले भट्टराईको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न ताप्लेजुङ पुगेका बेला भनेका थिए–योेगेशलाई चुनाव जिताएर पठाउनुस्, म मन्त्री बनाएर पठाउँछु ।
जब, उनै ओली प्रधानमन्त्री भए, तीन/चार पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे तर, भट्टराई मन्त्रीमण्डलमा अटाएनन् । ओलीसँग आक्रोशित कार्यकर्ताले ताप्लेजुङको भाषणलाई ‘भाइरल’ बनाए । यद्यपी, योगेश मन्त्री बनेनन् ।
भट्टराई पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीइतर लाइनका रुपमा परिचित छन् । त्यसकारण फरक समूहकै भएका कारण ओलीले उनलाई मन्त्री बनाएनन् भन्नेखालका प्रचार पनि गरिए ।
संसदको सार्वजनिक सुनुवाई समितिमा रहेका भट्टराईले प्रभावकारी काम गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका सर्वाेच्चका विवादित न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने काममा भट्टराईले नेतृत्व गरेका थिए ।
साथै, चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गराउनमा पनि भट्टराईले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । मन्त्री नबनाइएपछि कतिपयले उनलाई सुनुवाई समितिको सभापति बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए । तर, भागबण्डा गर्दा राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णलाई समिति सभापति बनाइएको थियो ।
नेतृत्वले गरेका गलत कामको खुलेर विरोध गर्ने स्वभाव भट्टराईमा छ । संसदमा समेत सरकारले गरेका गलत कामको खबरदारी र राम्रो कामको प्रसंशा गर्ने भूमिका उनी प्रस्तुत हुन्छन् । भट्टराईको यही बानीका कारण उनी मन्त्री बन्न सकेनन् भन्ने टिप्पणी पनि नसुनिएका होइनन् ।
तर, नेकपाभित्र प्रष्ट वक्ताको परिचय बनाएका, अहिलेसम्म कुनैपनि लाभको पदमा नपुगेका र मन्त्रीका लागि जनस्तरबाट निकै रुचाइएका उनै भट्टराई अन्तत : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री बनेका छन् ।
गएको फागुन १५ गते भट्टराईकै जिल्ला ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा तत्कालीन मन्त्री रबीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरिरहेका थिए । संयोगले १५ गते (साउन) गते नै प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईलाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मा दिएका छन् ।
केही समय पहिले ओलीले भट्टराईलाई बालुवाटार बोलाएर मन्त्रीका लागि तयार रहन भनेका थिए । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले आफूइतर समूहका नेताहरुलाई समेत बालुवाटार बोलाएर हार्दिकतापूर्वक भेटघाट गर्ने गरेको समाचारहरु बाहिर आएका छन् ।
कार्यकर्ता र जनस्तरमा निकै रुचाइएका भट्टराईले मन्त्री हुँदा त्यो साख जोगाउछन् या जोगाउँदैनन् त्यो उनको कार्यकालले बताउने नै छ । यदि, उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा राम्रो ‘पर्फमेन्स’ दिन सके भने पक्कै पनि उनको आगामी राजनीति यात्रा थप उज्यालो हुनेछ ।